दाईजो थोरै भयो भन्दै २० वर्षीय श्रीमतिको हत्या – Rajdhani Daily
दाईजो थोरै भयो भन्दै २० वर्षीय श्रीमतिको हत्या
सुजीतकुमार झा, जनकपुरधाम । धनुषाकी २० वर्षिय महिलाको भारतको मधुवनीमा हत्या भएको छ । धनुषाको विदेह नगरपालिका–९ वैदेही गाउँ निवासी स्व. राजकुमार झाको छोरी कृतिलाई भारतको मधुवनी जिल्ला रहिका गाउँस्थित घरमा श्रीमान र सासु हत्या गरेको अवस्थामा उनको शब फेला परेको छ ।
दूई वर्ष अघि तीन लाख दाइजो लिएर विहे भएका कृतिकाका श्रीमानले दाइजो थोरै भएको भन्दै थप दाईजो माग्दै आएका थिए ।
आइतबार बिहान कृतिको शव गाउँकै पोखरी छेऊमा देखेपछि स्थानीयहरूले रहिका थानामा प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । मृतकका श्रीमान रंन्धीर मिश्राले शवलाई आफ्नो जिम्मामा लिएर जलाउने प्रयास गरेखपनि माईतबाट कृतिका दाई राजीव कुमार झा र उनका नातेदारहरू समयमै घटनास्थलमा पुगेर शव नियन्त्रणमा लिएर परिक्षणका लागि सदर अस्पताल मधुवनी पठाएपछि हत्या गरेको सार्वजनिक भएको थियो । शवको पोष्टमार्टम रिपोटमा घाँटी थिचेर मारिएको उल्लेख छ ।
गएको शनिबार साँझ करिब सात बजे रन्धीरले कृतिका दाई राजीवलाई फोन गरि ‘तिम्रो बहिनी घरबाट भाँगी भन्दै फोन गरेका थिए । आईतबार विहान कृतिका माईती पक्ष घर पुग्दा हत्या गरि शव फालिएको अवस्थामा थियो ।
कृतिका दाई राजीवले रहिका थानामा बहिनीलाई हत्या गरिएको लिखित मुद्दा दर्ता गराएपछि सासु रंजुला मिश्रलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ कृतिका श्रीमान रंन्धीर भने फरार छन् ।
चारकट्ठा जमिन बेचेर गरिएको थियो कृतिको विवाह
दुई वर्ष अघि कृतिको रन्धीरसँग माँगी विवाह भएको थियो । एसएलसी सम्म पढेकी कृतिलाई प्लस टु पास गरेर हार्डवेयर को व्यापार गर्ने रन्धीरसँग विवाह गर्नका लागि घरपरिवारले जेनतेन तीनलाख सम्म खर्च गरेको थियो । बुवा बितेको कारण आमा ममताले छोरीको राम्रो घरमा विवाह गर्न भारतमा रहेका आफ्ना भाईहरू मार्फत रन्धीरको परिवारलाई भेटाएकी थिइन् । मध्यम वर्गिय परिवार भएको हुँदा छोरीलाई राम्रै होला भनेर विवाह गरियो तर, विहेको दुई चार महिना नबित्दै कृति माथि यातना बढ्न थालेको उनको आमा ममता झाले बताईन्। छोरीको विहेमा विदेह नगरपालिकाको ४ कटठा जमीन बेच्नु परेको थियो ।
घरका सदस्यहरुले विभिन्न सामानहरूको माग गर्दै उनलाई पटक पटक यातना दिएका थिए । यातना पाएको विषयमा परिवारका सदस्यलाई जानकारी पनि गराएकी थिइन् ।
कृति गर्भवती हुँदा समेत परिवारका सदस्यले वेवास्ता गरेका थिए । गर्भवती हुँदा समेत सासु र श्रीमानले यातना दिएर माईती पठाएका थिए । जनकपुर अंचल अस्पतालमा उनले छोरालाई जन्म दिएकी थिईन् भने स्यहार सुसार माईतीले गरेका थिए ।
अब कहाँ जान कति रुपैयाँ लाग्छ ? बढ्दो भाडादरले दसैंमा यात्रु मारमा
मुद्धा हारेपछि नुरप्रसादद्वारा इजलाश अधिकृतमाथि कुर्सी प्रहार, अदालत तोडफोड
तेजाव आक्रमणबाट घाइते सम्झना दासको मृत्यु
September 2018 (1699)